Kenya Oo Shaaciyay In 15 Kaluumaysato Kenyaan ah Lagu Adoonsado Gudaha Somaliya. - Awdal Media
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in 15 Nin oo Kalluumeysato Kenyaan ah xoog lagu afduubtay islamarkaana ay ku shaqeystaan Doon Kalluumeysi oo laga leeyahay Soomaaliya.
Guddiga Kalluumeysatada Kenya ayaa sheegay in Shan iyo Tobanka Nin gacanta lagu dhigay, si qasab ahna lagu shaqaysto iyaga oo aan la siinin wax lacag ah.
Betty Makena, oo ka mid ah Guddi u dooda xuquuqda Kalluumeysatada Kenya ayaa sheegay in koox kaluumaysato Soomaali ah islamarkaana hubaysan ay sida addoonta oo kale uga shaqeeyaan doomahooda raga Kalluumeysatada Kenyaanka ah.
Mr Betty, ayaa sheegay in shaqaalaha Kenyaanka ah ay ku jiraan halis loona baahanyahay in la soo badbaadiyo isaga oo ugu baaqay dowladda Kenya in ay qaaddo tallaabo lagu badbaadinayo.
Wuxuu intaas kusii daray in muwaadiniintaan lagu shaqeysto saacado badan Maalintii haddii ay diidaan loo adeegsado cabsi gelin, maadaama dadka ku shaqeysto ay hubeysan yihiin.
Ma’uusanka ayaanan sheegin halka lagu hayo, meesha laga soo afduubtay iyo waqtiga la qabsaday toona,hayeeshee waxaa uu warbaahinta Kenya u xaqiijiyay dhacdadan.